Melody Wanna Follow Wherever Boyfriend Go - Myanmar Celebrity News | Gossip| Fashion| Entertainment| MyanmarCelebrity.com
Melody Wanna Follow Wherever Boyfriend Go
Myanmar Popular Model and Actress, Melody said Local Journal that she wants to follow wherever her boyfriend goes, if it is possible.. and ... she also wants to visit Beaches with her boyfriend. However, There isarumor that Melody has already left her two lovers. ချစ်သူခေါ်တဲ့နေရာ အကုန်လိုက်ချင်တဲ့ မယ်လိုဒီ
မယ်လိုဒီက ဖြစ်နိုင်ရင် ချစ်သူခေါ်တဲ့နေရာ အကုန် လိုက်ချင်ပါတယ်၊ Beach လို နေရာမျိုးလည်း သွားချင်ပါတယ်လို့ ဂျာနယ်တစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မယ်လိုဒီဟာ အရင်တုန်းက ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို ထားခဲ့ဘူးသူလို့ ကောလဟာလ သတင်းတွေ ထွက်နေတာပါ။
AnonymousJanuary 30, 2010 at 4:22 AMဂျဲမိုင်း နေတယ် ကလေးမ... ချက်ကြီးတို့တော့ မဖွတော့ဘူး ဟိဟိ.. ကျန်တဲ့ ကိုရင်တို့ ဆက်ဖွလိမ့်မယ်... ပုံ/ ရွာဆော်ချက်ကြီး ( လကုန်ရက် ဘိုင်ပြတ်နေခိုက် ပင်လယ်စာ နှင့် ညစာစားချိန်တွင်ရေးသည်)ပင်လယ်စာ= ငါးသေတ္တာ .။ ဟီးဟီးReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 5:22 AMဂျဲမိုင်းသလို သွဲကြား နေတယ်...:D ဗက်ကီး...ReplyDeleteလုလင်မောင်မူးJanuary 30, 2010 at 6:46 AMဪ ကလေး၁ယောက် အမေးလဲ တော်တော်ရွတယ်နော် ...........ReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 7:54 AMloet tat room call yin yaw lat mar lar/hoet lar/ha ha haReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 8:57 AMအဲဒါဆို အနော့်ကိုတွဲ အကုန်လိုက် ပို့ပေးမယ်။ ဟော်တယ်ပါမကျန်...ဟီးဟီး (မှတ်ချက်။ တွဲပဲတွဲချင်တာနော် ယူတော့ ယူချင်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဂျိုင်းတောင်အဲလောက်မဲနေတာဆိုတော့... ကို့ဘာသာာဆက်တွေးကြတော့နော်)ReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 11:52 AMInteresting..Not BADReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 12:43 PMVery funny to read comments, I like italot... Keep comments it Guys ;-DReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 2:17 PMHOTE LAR!!!!!! MELODY KA KA LAY AMAY LAR?????ReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 3:39 PMwa tote gyiReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 6:05 PMမယ်လိုဒီက တကယ်ကလေးအမေလားဟင်............မယုံနိုင်စရာပဲနော်...........အစကတော့ကေအေတီကိုပဲချစ်တယ်ဆို.......အခုတော့ ဘယ်သူဖြစ်သွားပြန်ပြီလည်း..အော် အမြဲတမ်းပြောင်းလည်းနေတယ်နော်..........ReplyDeleteAnonymousJanuary 30, 2010 at 8:25 PMshe can go anywhere with any guys for any reason. she like to sex with any guys. she can suck any kind of dick. so pathetic for her son. her son dosent know he's competition with many man for sucking his mom boobs.ReplyDeleteAnonymousJanuary 31, 2010 at 12:32 AMlol, i like the comment'competition with other men for sucking his mom boobs'ReplyDeleteAnonymousJanuary 31, 2010 at 8:36 AMimao. lol.ooh lala are you his son who is competing with her lovers whom you can call as Alexandro(olden men who are sugar daddies, Fernando (the younger men. All right, you no quiero. lolReplyDeleteAnonymousJanuary 31, 2010 at 1:50 PMဟား.ဟား..ဟား......ဟား...ReplyDeleteAnonymousJanuary 31, 2010 at 9:23 PMသူပြောတာကိုက ချစ်သူခေါ်တဲ့နေရာတဲ့ဘယ်နေကိုမဆိုကို ဆိုလိုတာပေါ့~~ဒါအတိတ်စိမ်းပေးလိုက်တာဘဲ~~နှစ်ယောက်ထဲကမ္ဘာဆိုတာကြီးကိုလဲသွားမှာဘဲ မတားနဲ့ပေါ့~~ReplyDeleteAnonymousFebruary 2, 2010 at 1:19 PMသိပ်ကြိုက်တယ် ချစ်ဖို.ကောင်းလွန်းလို.လေReplyDeleteAnonymousFebruary 2, 2010 at 8:18 PMအပျိုဆိုရင်တော့ ချစ်ဖို့ကောင်းမှာဘဲအခုဟာက အအိုကြီးလေဟီးဟီး မန်းတောင်မမန်းရဲဘူးReplyDeleteAnonymousFebruary 3, 2010 at 5:55 AMHOOO...........................................HOOOReplyDeletethu zarFebruary 3, 2010 at 6:05 AMreally it ok i hate boyReplyDeleteAnonymousFebruary 3, 2010 at 9:42 AMဒူဘိုင် beach မှာတော့လိုက်သွားပြီး..မကော့လိုက်ပါနဲ့နဲ့..ထောင်ထဲမှာ..၆လ.ထပ်ကော့နေရမယ်။ReplyDeleteဗိုလ်မြFebruary 4, 2010 at 12:57 AMသြော် မယ်လိုဒီသူ့ဘဝကလဲသနားစရာ ကြည့်ရတာသူ့ချစ်သူကဘာမှမလုပ်ဘူးထင်တယ် မနေနိူင်တော့လို့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးနေတာထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလဲနှစ်ယောက်ထဲပြောရောပေါ့ အခုတော့အားလုံးသိကုန်ပြီReplyDeleteAnonymousFebruary 5, 2010 at 3:03 AMတွင်းဟောင်းရေကြည်အေးမြသည်တဲ့ ကလေးတယောက်အမေဆိုတော့သင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ReplyDeleteAnonymousFebruary 5, 2010 at 10:54 AMနောက်ဆုံးကိုကိုကတော့ မြန်မာနိင်ငံမြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ၊အိမ်ထောင်သည် ကလေးအဖေပါReplyDeleteAnonymousFebruary 12, 2010 at 8:26 AMမယ်လိုဒီက အရင်တုံးက လေဆိပ်ကနေ မြောက်ဥက္ကလာပဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ ဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုတယ်၊ မြန်မာအကတွေ၊ မြန်မာသီချင်းတွေပေါ့၊ အဲဒိက တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်က သူ့ယောင်္ကျား၊ အဲဒါပြီးတော့ ကေအီတီ၊ နောက်တော့ ဘယ်သူမှန်းမသိတော့ဘူး၊ ငါမဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်..ReplyDeletethu zarFebruary 22, 2010 at 7:08 AMi love her movies and i like her faceReplyDeleteရေခဲFebruary 26, 2010 at 8:52 PMအခုတော့ မလိုက်နဲ့ဦး မယ်လိုဒီရယ်ကိုကိုရေခဲ အီအီးသွားပါမလို့ .. နံနံ..နေခဲ့နော်။ReplyDeleteAnonymousFebruary 26, 2010 at 10:48 PMအဲဒီ ကရင်မ ကို နှိပ်စက်ပစ်ချင်တယ်ကွာ~မဲ ချင်တဲ့နေရာ မဲ ပေလေ့စေ ဟဲဟဲReplyDeleteAnonymousFebruary 27, 2010 at 6:11 AM>Yeah Feb26,7:48am.>အဲဒီ ကရင်မ ကို နှိပ်စက်ပစ်ချင်တယ်ကွာ~>I also like to fuck that Karen bitch all the holes of hers.ReplyDeleteAnonymousMarch 5, 2010 at 3:10 PMdon't say karen i am karenReplyDeleteလင်ပန်းMarch 7, 2010 at 6:40 PMမယ်လိုဒီက ၀ိတ်မတယ်ကွ။ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကတင် ပစ်ရိုက်လို့ ကတော့ စောက်ခွက်ပါပဲ့သွားနိုင်တယ်။ReplyDeleteလှMay 19, 2011 at 2:44 AMwanna go HotelReplyDeleteAdd commentLoad more...